200-125 300-115 200-105 200-310 640-911 300-075 300-320 300-360 642-998 QV_DEVELOPER_01 400-101 700-501 117-201 70-696 700-505 600-199 400-351 300-207 TE0-141 100-105 300-101 300-206 300-070 70-417 210-260 210-060 200-355 300-208 CISSP 300-135 210-065 300-209 70-243 70-480 CCA-500 2V0-621D 210-451 400-051 E05-001 1Z0-052 70-410 640-916 VMCE_V9 810-403 070-464 070-243 700-802 70-246 FCBA GPHR DEV-401 C2090-610 SY0-401 712-50 ADM-201 700-039 312-50 MA0-101 648-244 SK0-004 ASF 70-494 70-673 500-005 1Z0-060 C9560-503 640-875 N10-006 98-367 70-534 NS0-505 70-342 CHFP 070-410 640-878 1V0-603 1Z0-804 C8010-250 312-50V9 C2150-508 98-368 CLOUDF 70-411 70-461 220-901 70-488 070-341 PK0-003 E20-547 70-412 70-686 500-285 CISM 101-400 102-400 PDM_2002001060 JN0-100 642-883 CAP 070-347 MDGaas ayaa jawaab kulul ka bixiyay hadal ka soo yeeray Madaxweynaha dowladda Federaalka ah ee Soomaaliy | UfeynNews.com
MDGaas ayaa jawaab kulul ka bixiyay hadal ka soo yeeray Madaxweynaha dowladda Federaalka ah ee Soomaaliy
Madaxweynaha Puntland C/wali Maxamed Cali Gaas ayaa jawaab kulul ka bixiyay hadal ka soo yeeray Madaxweynaha dowladda Federaalka ah ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud, kaasoo ahaa in Puntland ay ka kooban tahay Labo Gobol iyo Bar.
Hadalkan ayuu Madaxweyne Xasan Sheekh ka jeediyay dood wadaag habeen hore ka baxayay Telefishinka Universal TV, isagoo tilmaamay in Puntland ay iminka tahay Sagaal gobol oo ay iskeed u sameysatay, balse lagu aas-aasay Labo Gobol iyo Bar.
C/wali Gaas oo maanta dib ugu laabtay Gaalkacyo, kadib safaro uu ku tagay Itoobiya, Turkiga iyo Jabuuti ayaa hadalka Madaxweynaha ku tilmaamay mid nacasnimo ah, isagoo xusay in Madaxweynuhu aanu kala aqoon Gobolada dalka.
“Waxaa rabaa inaan jawaab kooban ka bixiyo hadal aan is leeyahay waa nacasnimo in Madaxweyne Xasan Sheekh uu ka yiri Idaacadaha, oo ahaa in Puntland ay labo gobol iyo bar tahay, waxaa muuqata dalkana waa xukumayaa in uusan dalka kala aqoonin, doorashana waa ku jiraa dee Madaxweyninimo ayuu raadinayaa, waxaa u qaatay dhul badan oo ka mid ah Shabeellaha Dhexe iyo Shabeelaha Hoose muu raaciyay”ayuu si kulul u yiri Madaxweyne C/wali Gaas.
Gaas ayaa sheegay in hadalka Madaxweyne Xasan Sheekh aysan Puntland ku yaraaneyno, kuna weynaaneyn, balse waxaa uu fariin u diray in Madaxweynaha uu kala barto gobolada dalka sida uu yiri.
“Hadalka Madaxweyne Xasan Sheekh, kuna yaraan-meyso, kumana weynaan meyso, shan gobol iyo degmada Buuhoodle ayaa lagu aas aasay, maantana waa sagaal gobol haduu madaxweynaha uusan aqnoon anaga baraneyno, ha daawado, ha dhageysto, haa barto”ayuu yiri C/wali Gaas.
Puntland ayaa ah maamulkii u horeeyay ee Federaal ee dalka ka sameysma, iyadoo Gobolada Nugaal iyo Bari ay yihiin labada gobol oo aan lala wadaagin, marka laga reebo Mudug, Sanaag iyo Sool oo deegaanada qaar ay ka taliyaan maamulo kale.